Osimiri Croatian mara mma nke 6 chọrọ ịla n'iyi | Akụkọ Njem
6 ọmarịcha osimiri ndị Croatian chọrọ ịhapụ
Maria | | Croacia, Getaways Europe
Osimiri Banje na Dubrovnik
Mmiri doro anya na oke ocha, ihe ndị a bụ ụfọdụ nkọwapụta nke kachasị kọwaa ụsọ osimiri Croatia. Site na Dubrovnik ruo Istria na-agafe ihe karịrị otu puku agwaetiti, ụdị osimiri dị iche iche dị oke mma. Enwere ihe uto nile: aja, ezinulo, ndi gba ọtọ, egwuregwu ...
Ezigbo njem maka nke ị ga-achọ naanị mmiri mmiri, mmiri na-acha anwụ na obere uwe iji nwee ọmarịcha oriri na ọ onụ enjoyụ n'ụsọ osimiri Croatia. Njikere ịnụ ụtọ paradaịs n'elu Adriatic?
1 Banje osimiri (Dubrovnik)
2 Oke Zlatni (Island nke Brac)
3 Osimiri Proizd (Korcula)
4 Osimiri Punta Rata (Brela)
5 Agwaetiti Pakleni (Hvar)
6 Osimiri Stiniva (Vis Island)
Banje osimiri (Dubrovnik)
Nke a bụ osimiri kachasị ewu ewu na obodo na otu n'ime ihe ndị mara mma na mbara ala. Ọ bụ ezie na ọ bụghị nnukwu, ọ na-enye gị ohere ịnụ ụtọ anyanwụ Croatian ma na-enye echiche dị egwu banyere mgbidi Dubrovnik na agwaetiti Lokrum na-esote.
Osimiri a dị ezigbo mma dị ka ọ na-agwakọta n'ụzọ zuru oke ịbụ ebe njedebe osimiri dị na obodo akụkọ ihe mere eme. Ọtụtụ mmadụ na-abịakwute ya, na-adọta ya site na mmiri ya kristal, ihe egwuregwu ya, Ogwe ya na ndụ ọ nightụ ya.
Ga Banje osimiri dị mfe. Ọ dị n'ọnụ ụzọ ọwụwa anyanwụ nke ebe akụkọ ihe mere eme n'ihu Puerta de Ploce. Mgbe ahụ naanị ị ga-aga ije mita iri itoolu n'akụkụ osimiri.
Oke Zlatni (Island nke Brac)
Zlatni Oke osimiri
N ’ihe puru omume obula bu ihe osise osimiri kacha ewu ewu na Kroshia n’ihi mpi mpi ọla edo ya nke na-agbanwe n’elu isi ya site na ebili mmiri na ifufe. Zlatni Rat bụ paradise nke na-efe mmiri n'ihi na ifufe na-adị mgbe niile ma ha nwere ike ịme egwuregwu mmiri kachasị amasị ha n'oge niile. N'ezie, n'ụsọ osimiri a ị nwere ike ịchọta ụlọ akwụkwọ mmiri na ikuku na-efe ikuku. Ọ dị na Bol, obodo udo nke dị na ndịda agwaetiti Brac. Nke a bụ otu n'ime agwaetiti kacha nso na Split, nke mere na ọ na-enye ohere ịnweta njem njem iji nọrọ ụbọchị ahụ.
Fergbọ mmiri ahụ gaa Zlatni Rat na-apụ site na Supetar, bụ obodo azu nke ewepụtara maka ịkụ azụ, ọrụ ugbo na njem. Ugboro ugboro nke ụgbọ mmiri si na elekere ruo elekere na ọkara.
Osimiri Proizd (Korcula)
Osimiri aja ọcha, mmiri miri emi na-acha anụnụ anụnụ na ebe nzuzo nzuzo, Proizd bụ nrọ n’ụwa. Ọ dị n'agwaetiti Korcula na-ebighị ebi, nke ị ga-ebu ụgbọ mmiri si Vela Luka banye ebe ahụ. Osimiri atọ a maara dị ka Bili Boci na akụkụ ugwu nke agwaetiti ahụ pụta ìhè karịsịa. Site na ha ị nwere ike ịhụ profaịlụ nke agwaetiti Hvar dị nso na oke osimiri. N'oge dị elu, mgbe enwere ọnụ ọgụgụ ndị njem nleta, a na-emepe ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri iji jeere ha ozi, ọrụ ụgbọ mmiri kwa ụbọchị.
Osimiri Punta Rata (Brela)
Punta Rata osimiri dị mma maka ezinụlọ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, akwụkwọ akụkọ Forbes gụnyere ya na iri kachasị mma osimiri kachasị mma n'ụwa maka mmiri dị jụụ, ikuku dị ọcha na ndò nke osisi pine gbara ya gburugburu na aja ọcha ya. Dị ka ọtụtụ n'ụsọ mmiri dị na Croatia, Punta Rata na-agba agba ma nwee ogige njem nleta zuru oke nke ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ọrụ mmiri maka ụtọ na afọ niile.
Agwaetiti Pakleni (Hvar)
Foto site na Croatia HR
Pakleni Islands bụ otu agwaetiti pere mpe na agwaetiti iri abụọ n’akụkụ Island nke Hvar. Ha bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ndị na-achọ inyocha osimiri ọhụrụ dịka enwere ihe maka onye ọ bụla. Na mgbakwunye, n'etiti ihe omume ndị ọzọ ị ga-eme, ọ bara uru ileta marina Palmizana n'àgwàetiti St. Klement, osimiri Jerolim nudist, ọmarịcha ụlọ ọrụ ndakpu mmiri ya ma ọ bụ ụlọ egwuregwu Carpe Diem ama ama iji nwee obi ụtọ n'abalị ahụ.
N'ihe dị ka nkeji 20 ị nwere ike iru ọrụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ ga-eburu gị n'agwaetiti ndị a.
Osimiri Stiniva (Vis Island)
Stiniva bụ ọmarịcha mara mma nke zoro ezo naanị mita 30 ogologo zoro n'etiti nkume nke ụsọ mmiri Croatian. Ọ dị na ndịda nke agwaetiti Vis, nke naanị 90 kilomita kilomita na ihe dịka ndị bi na 3.000, dị nso na obodo Marina Zemlja. Enwere ike ịnweta ya naanị site n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ site na ụzọ dị warara nke na-amalite site na obodo Podšpilje, ya mere echekwara ya nke ọma.
Mmiri Stiniva Beach dị ọcha ma aja nwere obere pebbles na-acha ọkụ ọkụ. Ọ bụ ebe zuru oke iji mikpuo ma nwee obi ụtọ ikuku Adriatic. Dị ka ịnweta ebe a adịghị mfe, ọ bụghị mmadụ jupụtara, na-aghọ ebe paradaịs ebe ihe karịrị otu ga-achọ ịhapụ oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » 6 ọmarịcha osimiri ndị Croatian chọrọ ịhapụ
Northern Alaska, oke ụwa
Ebumnuche 5 iji mara Jọdan dị egwu